Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Rajaonarimampianina mivady: Ny mpianatra indray no lalaovina ara-pôlitika maloto
Filoha Rajaonarimampianina mivady: Ny mpianatra indray no lalaovina ara-pôlitika maloto
Rahampitso alarobia no hifamotoana amin’ny mpianatra eto andrenivohitra sy ny manodidina eny amin’ny kianjaben’Antsonjombe ny Filohampirenena Rajaonarimampianina mivady. Ny antony dia hoe hizarana an’ireo kojakojam-pianarana na « kits scolaires ». Olona any amin’ny 60.000 isa any no antenain’ingahy filoha mivady ho avy eny ka mba hahatrarana an’io isa io dia noterena ho tsy maintsy mitondra ray aman-dreny ireo mpianatra. Raha tsy izany dia tsy hahazo an’ilay kojakojam-pianarana.
Dia niezaka nijery ka namadibadika ny Lalàmpanorenana izahay fa tsy misy rafi-panjakana na andrim-panjakana mihitsy ao milaza izany « filohampirenena mivady » izany. Eo izany no mahalasa fisainana satria ity fizarana kojakojam-pianarana ity izany dia tsy amin’ny anaran’ny fanjakana ka hoe ny filohampirenena amin’ny maha-andrim-panjakana voalohany azy eto amin’ny tany sy ny fanjakana no manao azy, fa Ingahy Rajaonarimampianina mivady.
Misy mahasamihafa azy io fa aoka isika olom-pirenena hahay manavaka tsara an’ireo.
Karazan’ny vola madiodion’ny filohampirenena mivady izany no hoenti-nanana an’ireo kojakojam-pianarana hozaraina amin’ny alarobia ho avy izao ireo, ary azo antoka fa tsy maintsy hahazo ny anjarany ny mpianatra manerana ny Nosy. Raha tsy izany dia misy fiangarana avy amin’ny filohampirenena mivady ka haharatsy tarehy azy eo anoloan’ny raharaha ho avy ilàny an’ilay vahoaka.
Ny mahavariana izany dia tsotra. Tao anatin’ny taona maro dia ny fanjakana malagasy no nanao an’io fanampiana ny raiamandrenin’ny mpianatra amin’ny fanomezana kojakojam-pianarana io mba hanamaivanana ny fahasahiranan’ny isan-tokantrano rehefa fotoam-pidiran’ny mpianatra. Amin’izao fotoana, nahoana no tsy afaka manatanteraka izany ny fanjakana fa ny filohampirenena mivady no miantoka azy ?
Noho ny tsy fananan’ny fanjakana vola natokana ho amin’izany ve ? Tamin’ireny volana oktobra ireny mantsy dia efa nisy koa ny fanentanana ny mpiasam-panjakana isaka ny ministera mba hanao tsipaipaika hoenti-manana ny kojakojam-pianarana ho an’ny zanaka ny mpiasa eny anivon’ny ministera. Tamin’izany dia efa tsikaritra fa toa tsy ho vitan’ny fanjakana ny miantoka an’io kojakojam-pianarana ho an’ny mpianatra io amin’ity taom-pianarana vaovao ity.
Nisy koa ny fanentanana ny tompon’andraiki-panjakana ambony isaka ny ministera mba hanolotra hatramin’ny 100.000 ariary avy hoentin’ny minisitra manolotra kojakojam-pianarana ho an’ny mpianatra amin’ny sekoly izay ny minisitra isanisany no mamaritra an’izay hotolorana azy.
Endrika isehoan’ny fampielezan-kevitra pôlitika avokoa aloha izany, raha tsy fantatsika.
Taorian’izany rehetra izany dia ity hotanterahin’ny filohampirenena mivady rahampitso alarobia eny Antsonjombe ity no endrika iray goavana ho amin’izany.
Fa tokony hahazendana koa anefa ny mieritreritra ny hoe « rehefa ny fanjakana no tsy manam-bola hoenti-miantoka ny kojakojam-pianarana toa ireny, nahoana tampoka teo no lasa manana ny hoenti-manatanteraka izany ny filohampirenena mivady ? » Tamin’ny fitondrana Ravalomanana mantsy ohatra, satria tamin’izany no nanombohan’ity fizarana « kits scolaires » ity dia nisy ny fanereny ny mpandraharaha sinoa mba hiantoka an’io, dia tratra hatrany, ary nisy hatramin’ny haron’akanjo aza (miloko maitso).
Dia fisainana inona àry no tsy hiahiahy ny amin’ny hoe sao volam-panjakana tao ihany no nenti-niantoka ny kojakojam-pianarana hatolotry ny filohampirenena mivady manomboka amin’ny alarobia ho avy izao fa isandohan’izy mivady hoe « avy aminy » ? Efa nitranga mantsy io fanodinan-javatra io, ary ny gazety mpiseho isanandro iray eto an-toerana (La Vérité) dia namoaka ny sary momba izany indrindra. Tsy inona io fa nanolotra kojakoja ho amin’ny famongorana ny pesta sy fitsaboana an’ireo izay tratry ny pesta ny vadin’ny filohampirenena, Rajaonarimampianina Voahangy. Ny sary navoakan’io gazety mpiseho isanandro io dia nanaporofo fa fitaovana sy kojakoja nomen’ny Firenena Mikambana ny firenena malagasy no natolotry ny vadin’ny filohampirenena tamin’ny anarany. Ny tanjony moa dia mba hanaovany fampielezan-kevitra. Ka sao lahy ka mitovy amin’izany koa ity fanomezan’ny filohampirenena mivady kojakojam-pianarana manomboka amin’ny alarobia ity ? Izany hoe volam-panjakana ihany no nenti-nanana azy fa ny filohampirenena mivady no mizahozaho sy mirehareha ho nanao azy (tamin’ny volany manokana ???). Raha izay no fandehany, tsy fampielezan-kevitra pôlitika « maloto » mivandravandra ve izany ?